musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Entertainment » Masekasi muNorth Ireland anopera maclown
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Entertainment • mumhanzi • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Haasi munhu wese anofarira kusekwa asi kune mumwe munhu ari chiseko, husiku hwako hwakaipisisa hwaizove kusasekwa.
Yakakomba post-COVID-19 kushomeka kwe clown kunorova indasitiri yeNorthern Ireland's circus indasitiri.
Vanoda kukwikwidza vachada kuita zvinopfuura kungozvishambidza mumakeep uye lob custard pies kuti vazadze shangu dzakakura dzebasa ravo.
Kuva chisiki ndiko kuve nekukwanisa kuzviseka pachako - hazvisi zvekuseka vamwe vanhu.
Masekesi achakurumidza kutenderera Northern Ireland zvakare kamwe COVID-19 inodzivirira vakasununguka, asi sekureva kwenhau dzeBritish, vari kutarisana nekushomeka kwakanyanya kwema clown, nevatungamiriri vemacircus vachinetseka nekutsvaga vatambi vatsva.
Parizvino, nyika yese yave kuziva nezvayo UKDambudziko remafuta riri kuenderera mberi, asi vanhu vashoma vanoona kuti kune kushomeka kwakanyanya kwe clown mukati Northern Irelandmaseketi.
Vazhinji vevaimbi ava vakadzokera kunyika dzavo pakutanga kwechirwere cheCOVID-19 gore rapfuura, kana kuti kubva vakaenda kunze kwenyika kunotsvaga basa munyika dzakatovhurwa kare.
Neye vhiza maitiro eisiri-EU makwikwi akaomarara, varidzi vemasikisi vari kuyedza kusvika kune chero vanhu vari kumba vanonzwa kuti vanogona kuzvipa.
Vanoda kukwikwidza vachada kuita zvinopfuura kungozvishambidza mumakeep uye lob custard pies kuti vazadze shangu dzakakura dzebasa ravo. Sekureva kwemumwe muridzi wesekisi, paunopinda mukati mechende uye uine vanhu mazana manomwe kusvika mazana masere vanokutarisa, kunyangwe uine mafungiro akaita sei iwe unofanirwa kubatidza ringi irori. Iwe unofanirwa kuverengera vateereri vako, mumaminetsi mashoma iwe unofanirwa kugona kuwana hukama kuenda navo uye nekudyidzana uye kuvapa chikafu.
Nepo majee achinyora ivo pachavo, bhizinesi rekuseka harisi rekuseka, nyanzvi dzeindasitiri dzinoti: “Haasi munhu wese anoda kusekwa asi kune mumwe munhu anoseka, dambudziko rako rakaipisisa ringave rekusasekwa. "
"Unofanirwa kukwanisa kuzviseka iwe, hazvisi zvekuseka vamwe vanhu."